China OTR amacandelo Rim China OEM umenzi 25 ″ amacandelo mveliso kunye nabenzi | Hywg
Izixhobo ze-OTR Rim China umenzi we-OEM we-25 ″
Amacandelo eRim iringi yokutshixa, iringi esecaleni, isihlalo sebhedi, isitshixo somqhubi kunye necala lesangqa leentlobo ezahlukeneyo zeerimu ezinje nge-3-PC, 5-PC kunye ne-7-PC OTR iirim, i-2-PC, i-3-PC kunye ne-4-PC yeerobhothi. Inkqubo ye- I-25 ″ bubungakanani obuqhelekileyo be amacandelo rim Kungenxa yokuba uninzi lweevili zokulayisha, ezokutsala kunye nedumpers zisebenzisa iirim ezingama-25. Amacandelo eRim zibaluleke kakhulu kumgangatho wongqameko kunye namandla. Isangqa esitshixwayo kufuneka sibe nobuthathaka obuchanekileyo ukuze siqiniseke ukuba sitshixa irim ngeli xesha kulula ukwehla kunye nokunyuka. Isihlalo sebhedi sibaluleke kakhulu kubuchule bomphetho, sithwala umthwalo omkhulu womda. Amacangci emacaleni ngamalungu adibana nevili, kufuneka lomelele kwaye lichane ngokwaneleyo ukukhusela ivili.
Zithini izinto zerim?
Amacandelo eRim iringi yokutshixa, iringi esecaleni, isihlalo sebhedi, isitshixo somqhubi kunye necala lesangqa leentlobo ezahlukeneyo zeerimu ezinje nge-3-PC, 5-PC kunye ne-7-PC OTR iirim, i-2-PC, i-3-PC kunye ne-4-PC yeerobhothi. Inkqubo ye- amacandelo rim ineengcingo ezinkulu zobungakanani, iqala ukusuka kubungakanani 8 "ukuya kuthi ga kuma-63". Amacandelo eRim zibaluleke kakhulu kumgangatho wongqameko kunye namandla. Isangqa esitshixwayo kufuneka sibe nobuthathaka obuchanekileyo ukuze siqiniseke ukuba sitshixa irim ngeli xesha kulula ukuyinyusa kunye nokuhla. Isihlalo sebhedi sibaluleke kakhulu kubuchule bomphetho, sithwala umthwalo omkhulu womda. Iringi esecaleni licandelo elidibanisa nevili, kufuneka lomelele kwaye lichane ngokwaneleyo ukukhusela ivili.
Zingaphi iintlobo zamacandelo omjikelezo?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ze amacandelo rim, kwisicelo esahlukileyo sinemigangatho yoyilo amacandelo rimkunye nezixhobo zomsebenzi onzima. Ichazwe ngoyilo,amacandelo rim inokuhlelwa njengezantsi.
Izixhobo zokwakha izixhobo zomphetho
Uthotho lwe-T, uthotho lwe-EM.
Amacandelo Rim kwemigodi
Uthotho lwe-EM / EV
Izinto zerim zeforklift
Isangqa sokutshixa, iringi esecaleni, isihlalo sebhedi se3-PC kunye ne-4-PC yeerobhothi.
Zisebenzisela ntoni izinto zerim?
Eyethu Iindibano zeerim inokusetyenziselwa uninzi lweerim ze-OTR ezinje:
(1) Iifeleni zezixhobo zokwakha
(2) Iifolokhwe zeforklift
(3) Iifeleni zemigodi
Imizekelo yemodeli esiyibonisayo
Rim igama lezinto Ubungakanani
Umsesane wokutshixa 25 "
IKHITI YOKUQHUBA IBHODI Zonke ubukhulu
Icala esisangqa 25 ", 1.5"
Iringi esecaleni 25 ", 2.0"
I-35 ", 3.0"
Isihlalo Bead 25 ", 2.0", Umqhubi omncinci
25 ", 2.0" Umqhubi omkhulu
25 "x 4.00" (Notched)
Izinto eziluncedo kuthi zezinto ezingqonge irim?
Ekuqaleni njengecandelo elincinci lomenzi wentsimbi, i-HYWG yaqala ukuvelisa amacandelo rim ukusukela ekupheleni kweminyaka yoo-1990, ngo-2010 i-HYWG yaba yinkokheli yentengiso kwilori amacandelo rim kunye ne-OTR amacandelo rim, Isabelo sentengiso sifikelele kuma-70% nama-90% e-China; I-OTRamacandelo rim zithunyelwa kumazwe angaphandle kubavelisi bomphetho njengeTitan kunye neGKN. Namhlanje i-HYWG kuphelaamacandelo rim umenzi onokuthi avelise iilori, i-OTR kunye nefolokhwe amacandelo rim, siyinkokeli yehlabathi kwi amacandelo rim kwimarike.
Egqithileyo Umzi mveliso we-Boom lift ophethe i-Tele china manufacturer
Isikhongozeli Phakamisa rim ukufikelela isitaki rim kunye engenanto ...
Industrial rim for Boom lift Tele isibambo China ...
Izinto ze-OTR Rim ubukhulu obahlukileyo ukusuka ku-8 ″ ...
Izixhobo zokwakha i-OTR rim yeGrader China ...